Apple ayaa dib u cusbooneysiineysa WWDC 2021 iyadoo si toos ah uga socota YouTube | Wararka IPhone
Apple ayaa dib u cusbooneysiineysa WWDC 2021 iyadoo si toos ah uga socota YouTube
Isniinta soo socota, Juun 7 markay tahay 19:XNUMX fiidnimo gudaha Isbaanishka shirkii hore ee soo-saareyaasha Apple Development (WWDC). Waa waajib, gaar ahaan soo-saareyaasha codsiyada, laakiin sidoo kale loogu talagalay isticmaalaha ugu dambeeya.
Sababtoo ah isticmaaleyaasha "caadiga ah" waxay awoodi doonaan inay arkaan wararka sheegaya in softiweerka cusub ee qalabkeenna uu ku biiri doono, lagana yaabo in bilowga heerka qalabka ay sidoo kale dhici doonaan. Marka hadda waad iska qori kartaa kanaalka tooska ah ee Apple hadda ka furmay YouTube.
Apple ayaa durbaba soo saartay kanaalkeeda tooska ah YouTube ee WWDC 2021. markaa waad iska diiwaan gelin kartaa sidaas, waxaadna helaysaa ogeysiis markii ugu horreysay ay bilaabato, oo loo qorsheeyay toddobada saac Isniinta soo socota, Waqtiga Isbaanishka.
Marka laga reebo kanaalkan, waxaad kula socon kartaa dhacdada adoo maraya marinnada caadiga ah ee shirkadda. Mid wuxuu ku yaal bogga Dhacdooyinka iyo sidoo kale barnaamijka Apple TV. Apple sidoo kale waxay soo saartay bog gaar ah oo ah Dhacdooyinka WWDC 2021, taas oo ah meesha ay toos u tabin.
WWDC ee sanadkan ayaa na tusi doonta wararka ku saabsan IOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8, iyo tvOS 15. Waxaana laga yaabaa in heerka qalabka aan ku aragnay waxyaabo yaab leh, iyadoo la soo bandhigi karo qaabab cusub oo loo yaqaan 'MacBook Pro moodooyinka' Qaar ka mid ah xanta ayaa sheeganaysa in Federighi iyo dadkiisa ay na tusi karaan Waan arki doonnaa.
Haddayna taasi dhicin, ugu yaraan waxaan arki doonnaa wararka lagu dari doono softiweerka cusub ee ay shirkadda ku haysato "foornada" iyo in dhacdada ka dib ay bilaabi doonto inay ku sii dayso wajiga hore ee beta horumariyeyaashu inay bilaabaan inay tijaabiyaan.
Markaa waxaan si aad ah uga feejignaan doonnaa dhacdada usbuuca soo socda si aan u aragno wararka ku saabsan barnaamijka softiweerka, iyo laga yaabee Mac cusub oo ballaarinaya buugga astaanta cusub, awoodda badan, iyo midabada Silicon Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » WWDC 2021 » Apple ayaa dib u cusbooneysiineysa WWDC 2021 iyadoo si toos ah uga socota YouTube